दुनियाकै लामो कपाल भएको गाउँ, जहाँ महिलाको कपाल हेर्नकै लागि आउँछन् हजारौँ पर्यटक – Halkhabar kura
११ आश्विन २०७७, आईतवार २०:४४
११. म आफ्नो कोठाबाट प्रयोग गरिएको टिस्यु, रूमाल, मास्क र अन्य चीजहरू छुट्टै फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाल्नेछु र फालेपछि तुरून्तै कम्तिमा २० सेकेन्डसम्मका लागि आफ्नो हात साबुन र पानीले मिची मिची धुनेछु । रूमाल वा पुन प्रयोग गर्ने कपडा साबुन र पानीले सफासँग धुनेछु र यसलाई घाममा राम्ररी सुकाएपछि मात्र प्रयोग गर्नेछु ।१२. म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पालना गर्नेछु र आवश्यक सहयोगको लागि सधैं तयार रहनेछु ।१३. म क्वारेन्टाइनमा रहँदा आफ्नो शरीरको तापक्रम दैनिक एक पटक जाँच्नेछु र दिइएको फाराममा रेकर्ड गर्नेछु । मलाई दिईएको निर्देशन अनुसार १४ दिनसम्म मेरो दैनिक स्वास्थ्य स्थिति बारे तोकिएको स्वास्थ्य निकायमा जानकारी दिनेछु ।
Previous जापानमा विश्वकै महंगो आँप (ताईयो नो तामागो)
Next यौ’न स’म्पर्क गर्न नपाएर श्रीमती भा’गी भनेपछि श्रीमतीले खो’लिन् वास्तविकता,‘१० वर्ष देखि बे’डमै कु’रीरहेकी छु’ (भिडियो हेर्नुस्)